Ikpe anyi maka nwa amaala Saint Lucia | Amaala nke Saint Lucia
Enwere ọtụtụ ihe ịtụle mgbe ị na-ahọrọ obodo maka ụmụ amaala site na itinye ego. Anyị emeela atụmatụ ịbụ nwa amaala site na atụmatụ itinye ego na uche niile nke ndị na-achọ akwụkwọ. Site na nyiwe ụzọ nkwalite ego anọ pụrụ iche, ruo ndị isi ego nke ndị ọchụnta ego anyị na-eme kwa afọ, ka njikọ aka ọdịbendị anyị mara mma, anyị na-akpọ gị òkù ka anyị soro gị nụ ụtọ ndụ na ọganihu.
Ego ole itinye ego na itinye ego na Saint Lucia maka inweta nwa amaala abaliiri mmemme yiri ya. Ndị na-achọ akwụkwọ nwere nhọrọ nhọrọ anọ sitere na ego mkpuchi US $ 100,000 ruo US $ 3,500,000 maka otu na-achọ akwụkwọ. A na-atụkwa anya na ndị na-achọ akwụkwọ ga-akwụ ụgwọ nhazi na ụgwọ nchịkwa metụtara ya.